Chelsea 2:0 Real Madrid – 5 Qodob Oo Laga Bartay Guushii Chelsea – Garsoore Sports
Chelsea 2:0 Real…
Kooxda Kubbada-cagta Chelsea ayaa gaartay fiinalka Champions League-ga kaddib markii ay 2-0 kaga badiyeen kooxda Real Madrid, iyagoo wadar ahaan ku adkaaday goolal 3-1 ah labada lug ee semi-finalka tartankan.
Kooxda macalin Thomas Tuchel ayaa kula kulmi doona Manchester City magaalada Istanbul kaddib guushii ay u qalmeen ee Stamford Bridge oo ay Blues u xaqiijiyeen cayaaryahanada kala ah Timo Werner iyo Mason Mount.
Wiilasha macalin Zinedine Zidane ayaa cayaarta kusoo galay shax 3-4-3 ah, xitaa kabtan Sergio Ramos iyo xiddigii hore ee Chelsea Eden Hazard ayaa dib ugu soo laabtay kooxda, iyadoo rikoorkoodii aan wanaagsaneen ee guuldarro la’aanta kooxda Chelsea ay gaartay ilaa shan kulan.
Haddaba waa kuwan 5 qodob oo aan ka baranay guushii kooxda Chelsea ay ka gaartay Real Madrid:
1 ) Blues waxay ahayd inay mar hore ciyaarta disho
Wiilasha Macalin Thomas Thuchel ayaa haystay fursad dahabi ah maadaama ay lahaayeen gool marti oo ay soo dhaliyeen lugtii hore. Lugtan 2aad, Real Madrid ayaa kubbad heysasho badneyn guud ahaan kulanka, iyadoo ay taasi jirto Blues ayaa ka niyadjabsan inaysan cayaarta dilin xilli hore maadaama ay dib u heli lahaayeen kubbad heysashada iyagoo guul raaxo leh ka gaari lahaa kooxda macalin Zinadene Zidane balse ma dhicin taasi oo waxay fursad siiyeen inay kubbada iska maamushaan Modric, Kroos iyo Casemiro inkastoo aanay natiijo ka iman.
Qeybtii hore kahor inta aanu dhalin, Timo Werner ayaa gool looga diiday garabdhaaf. Si kastaba qeybtii labaad, Chelsea waxay ahayd inay ciyaarta disho goor hore maadaama cayaartooyda kala ah Mason Mount iyo N’Golo Kante ay heleen fursado ay ciyaarta ku dhammeyn karaan xilli-hore.
2) Daafaca Chelsea ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed kale oo addag
Tababare Thomas Tuchel ayaa kusoo billaabay daafaciisa cayaartooyda kala ah Andreas Christensen, Thiago Silva iyo Antonio Rudiger. guud ahaan kulanka, weeraryahan Karim Benzema ayaa si naadir ah dhib ugu ahaa goosha Blues, inkastoo uu sigay labba fursadood oo cajiib ah, haddana daafacyada Chelsea ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed heer sarre ah.
3) Edouard Mendy wuxuu u qalmaa amaan badan
Karim Benzema ayaa helay laba fursadood oo waaweyn si uu ciyaarta ugusoo jiido dhanka kooxdiisa Real Madrid. Markii ay Blues u baahneyd qof ka kor qaada halistan soo foodsaartay, Edouard Mendy ayaa ka haqabtiray.
Ciyaaryahankan heerka caalami ee reer Senegal ayaa si cajiib ah u badbaadiyay labadii iskuday ee uu sameeyay Karim Benzema kuwaasi oo ahaa kuwo halistooda watay , waxaana uu u qalmaa in loo sacabo tumo.
4) 3da weerar ee Chelsea, halistoodaa heer-sarreysay.
Halkii uu ku bilaabi lahaa Christian Pulisic, Thomas Tuchel wuxuu doortay inuu ku bilaabo kulanka Timo Werner, Mason Mount iyo Kai Havertz.
Markii ay Blues weerartamaysay, seddexda weerar ee hore ee Blues ayaa ahaa kuwo halis badan ku abuuraya daafacyada Real Madrid. Timo ayaa aad uga firfircoonaa garabka bidix wuxuuna ku guulaystay inuu hoggaanka u dhiibo Blues bilowgii qaybtii hore. Kai Havertz wuxuu udub dhexaad u ahaa kubbad heyntiisii iyo habkii uu asxaabtiisa ugu qaabeenayay luuqda cayaarta, wuxuuna mudanyahay amaan badan. Mason Mount ayaa isna ahaa mid si joogta ah ay ishu u heysay isagoo ku guulleeystay xilli dambe inuu goolkiisii helo.
5) N’golo Kante wuxuu ahaa macangag dhib badan
Chelsea waxay u baahneyd weeraro kasoo burqada khadka-dhexe Kaddib Maqnaanshiyaha Mateo Kovacic. Balse waxaa usoo baxay oo baahidaasi ka haqabtiray N’golo Kante.
Cayaaryahankan heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa muujiyay kartidiisa marka uu kubbada heysto, waxa uu ahaa mid kubbada qaadanaya, la ordaya deetana halis abuuraya.
Daafaca Real Madrid keliya iskama ilaalin Weerarka Chelsea balse N’golo Kante ayaa dhib ku ahaa daafacyada marka uu kasoo ordo khadka dhexe. Ka muuqashadiisii kulankan weyn ayaa u ogolaatay Blues inay si dhakhso leh u jabsato Real Madrid oo ay fursado u abuurto.
Istanbul Oo Laga Wareejinayo Fiinaalka Haddii Chelsea Ay Soo Baxdo Caawa ( Sabab ? )